सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटलमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु - GBM
मुख्य समाचार समाचार स्वास्थ्य/शिक्षा
२०७८ जेष्ठ २७ gautam buddha sandesh	0 Comments
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–८ लुम्बिनीरोडस्थित सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल प्रा.लि.ले अत्याधुनिक सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिरामीहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न ६४ स्लाइसको सिटी स्क्यान सेवा सुरु गरिएको अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन पौडेलले बताए ।
सिटी स्क्यान सेवाको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव नारायण चौधरीले उद्घाटन गरेका छन् । सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले अस्पताललाई सहयोग गर्न गाउँपालिका तयार रहेको बताए । उनले भुगोलको हिसाबले ठूलो रहेको मायादेवी गाउँपालिकामा धेरै कारखाना समेत रहेको बताए । सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल प्रा.लि.ले बिरामीहरुलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको अनभुति भएको उनले बताए । लुम्बिनीरोडसंगै जोडिएको अस्पताल जाने सडक निर्माणको लागि आगामी वर्षको बजेटमा रकम बिनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीको अत्यन्तै जटिल अवस्थाका बाबजुद पनि गाउँपालिकाले सरकारको निर्देशन पालना गरी कामहरु अगाडी बढाएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल प्रा.लि.का अध्यक्ष डा. सुवोध पाण्डेले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीहरुको मिहिनेत र लगनशिलताका कारण आफू खुशी भएको बताए । उनले अस्पतालको लागि करिब एक÷डेढ वर्ष चुनौती रहेको र चुनौती पार गर्दै जानुपर्ने र त्यसपछि स्थिर हुने बताए । डा. पाण्डेले अस्पताल कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएकोले सबैको सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले अस्पतालबाट केही त्रुटि÷कमी–कमजोरी भए सल्लाह, सुझाव तथा गुनासो गर्न समेत आग्रह गरे ।
हस्पिटलका हाड, जोर्नी, नशा तथा स्पाइनल सर्जन डा. जावेद खानले आफू अस्पतालमा आबद्ध भएको १० वर्ष भइसकेको बताए । उनले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (युसीएमएस) र काठमाण्डौमा हुँदा पनि बिरामीको सेवा लागेको बताए । निजी क्षेत्रको नमूना अस्पतालको रुपमा विकास हुँदै गएको अस्पतालले बिरामीलाई उत्कृष्ट सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ । अब सिटी स्क्यान सेवाको लागि बाहिर जानु नपर्ने र क्रमशः एमआरआई लगायतका परीक्षण सेवा पनि बढाउँदै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हस्पिटलका निर्देशक डा. अमित चतुर्वेदीले अस्पतालको स्थापना भएसंगै अब मायादेवी गाउँपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा अघि विभिन्न सेवा सुरु भइसकेको बताए । अन्य विभिन्न सेवा सुरु गर्ने योजना भए पनि कोभिड–१९ र निषेधाज्ञाका कारण सम्पूर्ण सामान र जनशक्तिको उपलब्धता नहुने भएका कारणले सुचारु गर्न नसकिएको डा. चतुर्वेदीले बताए । उनले सिटी स्क्यान सेवाले छिटो रिपोर्ट दिने भएकाले बिरामीको उपचार पनि छिटोछरितो गर्न सकिने बताए । अस्पतालका मानव संसाधन प्रबन्धक विद्या गौतमको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
← भीम अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री बाँड्दै अनेरास्ववियु र युवा संघ
भीम अस्पताललाई मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सहयोग →
वातावरण दिवसमा वृक्षारोपण
२०७५ जेष्ठ २२ gautam buddha sandesh	0
लियो क्लब अफ सिद्धार्थनगरमा लुईटेल
२०७५ आश्विन ८ gautam buddha sandesh	0
मनकामना लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.को समुदघाटन
२०७४ चैत्र २ gautam buddha sandesh	0